Nhau - Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Zvinoumbwa Dhizaini Tiles
Huni-epurasitiki decking DIY akateedzana anoratidza akakura manyorerwo ane diki chimiro, inova inokodzera kupaka muchivanze kana mubharanda.
Kutanga, ngatitarisei pamaitiro echigadzirwa:
Izvi zvese zvigadzirwa zveumwe-chidimbu. Iwo maTiles e DIY akasanganiswa nenzira dzakasiyana dzejometri, uye mapatani ari munzira yakatwasuka uye yakatwasuka inogadzirisa iyo ruvara, mwenje nemumvuri nenzira chaiyo. Saizi yechigadzirwa iri 300 mm X 300 mm.
Kuratidza mimwe mifananidzo ye DIY zvigadzirwa zvigadzirwa paving:
Iyo huni-plastiki DIY dzakateedzana ine yakanakira zvakanakira yekureruka kuisirwa, kukurumidza kushanda, hapana yakaoma maitiro anodikanwa, hapana chikonzero chekushandisa yakajairwa yekuisa accessories, uye chengetedza yekumisikidza nguva uye mutengo.
Dzimwe nguva ivhu rinoda kugadzirwa harisi rakajairika, ndipo kana zvigadzirwa zve DIY zvigadzirwa zvinoratidza matarenda avo. Iwe unogona kuisa pasi paunoda maererano nenzvimbo chaiyo, uye chivanze chiri chakasununguka uye chakasununguka.
Semuenzaniso, mufananidzo unotevera:
Iyo huni-epurasitiki DIY akateedzana ane akatsiga chigadzirwa mashandiro, hapana kutsemuka, hapana kumonyoroka, uye zvinonyanya kubatsira kudhizaina uye kunodzivirira kuwanda kwemvura mushure memvura.
Post-kugadzirisa zvakare zvakareruka, ingoichenesa senguva dzose, kunyangwe vana vanogona kuibata nyore.
Wood mapurasitiki chigadzirwa chekuvaka chakaumbwa nekuburitsa huni tambo uye mapurasitiki mune chimwe chikamu. Iyo ine zvakanakira kukora kuramba, kushora kwemvura, kutsvedza kuramba, uye kupfeka kuramba. Iyo ndiyo yakasarudzika yekunze pasi zvinhu.